စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ဇူလိုင် ၁၉၈၁ (operational)
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၁ (တရားဝင်)
၇ မီတာ / ၂၂ ပေ
02L/20R[N ၁] ၄,၀၀၀ ၁၃,၁၂၃ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
02C/20C ၄,၀၀၀ ၁၃,၁၂၃ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
02R/20L[N ၂] ၂,၇၅၀ ၉,၀၂၂ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ (၂၀၁၄)
စင်ကာပူ ချန်ဂီ လေဆိပ် (အင်္ဂလိပ်: Singapore Changi Airport) သို့မဟုတ် ချန်ဂီ လေဆိပ်(IATA: SIN, ICAO: WSSS)သည် အာရှဒေသ၏ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှ၏ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အချက်အချာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူရှိ အဓိကလေဆိပ်လည်း ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူမြို့တွင်း စီးပွားရေး အချက်အချာကျရာ မြို့လယ်ခေါင်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၇ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေဆိပ်အဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခရီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်အဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ လေဆိပ်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ ချန်ဂီဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ လေဆိပ်ကို Changi Airport Group မှ အုပ်ချုပ်စီမံလျက်ရှိသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် Singapore Airlines, Singapore Airlines Cargo, ဆစ်အဲ လေကြောင်းလိုင်း, Scoot, Tigerair နှင့် Jetstar Asia Airways လေကြောင်းလိုင်းတို့အတွက် အဓိက အခြေစိုက်ရာဖြစ်သည်။
၃.၁ ခရီးသည် ဝန်ဆောင်မှု
၃.၂ ကုန်စည် ဝန်ဆောင်မှု
၄ ကိန်းဂဏာန်း အချက်အလက်များ
၅ မြေပြင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၅.၁ လေဆိပ်အဆောက်အဦးများ အကြား ဆက်သွယ်ရေး
ချန်ဂီလေဆိပ်သည် လေကြောင်းလိုင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော် မြို့ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်နှင့် ချိတ်ဆက်ပျံသန်းနေသည်။ ရက်သတ္တပတ်တိုင်းတွင် လေယာဉ်အတက်အဆင်း ၆,၆၀၀ ရှိသည်။ စက္ကန့် ၉၀ တိုင်းကို ၁ မိနစ် ဆင်းသက်နေကြသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ခရီးသည် ၅၄.၁ သန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ချန်ဂီလေဆိပ်တွင် အဆောက်အဦး (၃) ခုရှိပြီး ခရီးသည် ၆၆ သန်းကို နှစ်စဉ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၁) ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အမှတ်(၂) ကို ၁၉၉၀ နှင့် အမှတ် (၃) ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှာ အသီးသီးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဘတ်ဂျက်အဆောက်အဦးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပိတ်ခဲ့သည်။ အဆောက်အဦး (၄) ကို စတင်ဆောက်လုပ်နေပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ အဆောက်အဦး (၅) ကို ၂၀၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီမံကိန်းထားရှိသည်။
၂၀၁၄ ကိန်းဂဏန်းများအရ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် လူဦးရေ ၅၄ ၀၉၃ ၀၇၀ ဦးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကထက် ၀.၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ အချက်အလက်မှာ ၃၃ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အများဆုံးဖြစ်သည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပါတ်(၆) အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ အာရှမှာတွင် နံပါတ်(၂) အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ အလုပ်အများဆုံး နေ့ရက်များမှာ ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင် နေ့ရက်များဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ လူဦးရေ ၁၈၆ ၅၀၀ ခန့် လေဆိပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်သည် ကုန်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ရာတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အလုပ်အရှုပ်ဆုံး လေဆိပ်ဂိုဒေါင်ကြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကုန်တန်ချိန် ၁.၈၄ သန်း ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း လေယာဉ်ဆင်းသက်မှုပေါင်း ၄၃၁ ၃၈၆ စီးရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆုတံဆိပ်များ ရရှိခဲ့ရာ ဆုတံဆိပ်စုစုပေါင်း ၄၉၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးလေဆိပ်ဆုကိုလည်း ရရှိထားသည်။
AirAsia Kota Kinabalu, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Kuching, Langkawi, Miri, ပီနန် 1
Air China ပေကျင်း-မြို့တော်၊ Chengdu 1
Air France Jakarta–Soekarno Hatta (ends 26 March 2016), Paris–Charles de Gaulle 1
Air Mauritius Mauritius[Note ၁] 1
All Nippon Airways တိုကျို-ဟာနဲ့ဒါ့၊ တိုကျို-နာရိတ 2
Asiana Airlines ဆိုးလ်-အင်ချွန် 3
ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း Koh Samui 1
Batik Air Jakarta–Soekarno Hatta 3
British Airways လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး၊ Sydney 1
Cathay Pacific ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ဟောင်ကောင် 1
Cebu Pacific Cebu, Clark, Davao, Iloilo, Manila 2
China Airlines Kaohsiung, Surabaya, ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ် 3
China Eastern Airlines ကူမင်း၊ ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Wuxi 3
ဒယ်လ်တာ လေကြောင်းလိုင်း တိုကျို-နာရိတ 1
အဲမရိတ် လေကြောင်းလိုင်း Brisbane (ends 8 May 2016; resumes 1 October 2016), Colombo, Dubai–International, Melbourne 1
EVA Air ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ် 3
Fiji Airways Nadi (begins5April 2016) TBA
Firefly Ipoh, Kuala Lumpur–Subang, Kuantan 2
Garuda Indonesia Amsterdam,[Note ၂] လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး၊ (begins 31 March 2016),[Note ၃] Denpasar, Jakarta–Soekarno Hatta, Surabaya 3
Indonesia AirAsia Bandung, Denpasar, Jakarta–Soekarno Hatta, Semarang, Solo, Yogyakarta 1
Japan Airlines တိုကျို-ဟာနဲ့ဒါ့၊ တိုကျို-နာရိတ 1
Jetstar Asia Airways ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ Da Nang, Darwin, Denpasar, Fukuoka, Guiyang, Haikou, Hangzhou, ဟိုချီမင်းစီးတီး၊ ဟောင်ကောင်၊ Jakarta–Soekarno Hatta, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Manila, Medan, Osaka–Kansai, Palembang, Pekanbaru, ပီနန်၊ Perth, ဖနွမ်းပင်၊ ဖူးခက်၊ Shantou, စီရန်ရိ၊ Surabaya, ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ်၊ ရန်ကုန် 1
Jetstar Pacific Airlines ဟိုချီမင်းစီးတီး 1
လာအို လေကြောင်းလိုင်း ဗီယင်ကျန်း 2
Lion Air Jakarta–Soekarno Hatta 3
မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Kuching, Miri 2
Malindo Air Ipoh (ends7April 2016), ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 3
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း ရန်ကုန် 1
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန် 3
Oman Air ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Muscat 3
Royal Brunei Airlines ဘန်ဒါစီရီဘီကာဝန် 2
Scoot ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ Gold Coast, Guangzhou, Hangzhou, ဟောင်ကောင်၊ Jeddah (begins 1 May 2016), Kaohsiung, Melbourne, Nanjing, Osaka–Kansai, Perth, Qingdao, ဆိုးလ်-အင်ချွန်၊ Shenyang, Sydney, ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ်၊ Tianjin, တိုကျို-နာရိတ 2
Siam Air ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း 3
ဆစ်အဲ လေကြောင်းလိုင်း Balikpapan, Bandung, Bangalore, Cairns, Cebu, Changsha, Chengdu, Chennai, ချင်းမိုင်၊ ဟောင်ကောင်၊ Coimbatore, Da Nang, Darwin, Davao, Denpasar, ဟနွိုင်း၊ Hyderabad, Kalibo, Kathmandu, Kochi, Koh Samui, Kolkata, Kota Kinabalu, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Kuching, ကူမင်း၊ Langkawi, Lombok, Makassar, Malé, Manado, မန္တလေး၊ Medan, Palembang, Pekanbaru, ပီနန်၊ ဖနွမ်းပင်၊ ဖူးခက်၊ Semarang, Shenzhen, စီရန်ရိ၊ Surabaya, Thiruvananthapuram, Visakhapatnam, Wuhan, Xiamen, ရန်ကုန်၊ Yogyakarta 2
တီမော လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ပျံသန်း Dili 2
စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းအတွက် ပျံသန်း ဘန်ဒါစီရီဘီကာဝန် 2
စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း Ahmedabad, ဘန်ဒါစီရီဘီကာဝန်၊ Bangalore, ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ Cape Town, Chennai, Colombo, Denpasar, Delhi, Dhaka, Dubai–International, ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး၊ Jakarta–Soekarno Hatta, Jeddah (ends 30 April 2016), Johannesburg, Kolkata, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Malé, Manila, Mumbai, Surabaya, ရန်ကုန် 2
စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း Adelaide, Amsterdam, Auckland, Barcelona, ပေကျင်း-မြို့တော်၊ Brisbane, Canberra (begins 20 September 2016), Christchurch, Copenhagen, Düsseldorf (begins 21 July 2016), Frankfurt, Fukuoka, Guangzhou, ဟောင်ကောင်၊ Houston–Intercontinental, Istanbul–Atatürk, လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး၊ Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milan–Malpensa, Moscow–Domodedovo, Munich, Nagoya–Centrair, New York–JFK, Osaka–Kansai, Paris–Charles de Gaulle, Perth, Rome–Fiumicino, San Francisco, São Paulo–Guarulhos, ဆိုးလ်-အင်ချွန်၊ ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Sydney, ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ်၊ တိုကျို-ဟာနဲ့ဒါ့၊ တိုကျို-နာရိတ၊ Wellington (begins 20 September 2016), Zürich
Seasonal: Athens, Sapporo–Chitose 3
Spring Airlines ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း 1
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ Krabi, ဦးသဖောင်-ပတ္တရား၊ ဖူးခက် 1
Thai Airways ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ 1
ထိုင်းလိုင်းရင်း လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း 3
Tigerair Bangalore, ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ Cebu, Clark, Chennai, ချင်းမိုင်၊ Denpasar, Dhaka, Guangzhou, Guilin, Haikou, ဟနွိုင်း၊ ဟိုက်ရိုင်၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး၊ ဟောင်ကောင်၊ Hyderabad, Ipoh, Jakarta–Soekarno Hatta, Jinan, Kalibo, Kochi, Krabi, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Langkawi, Lijiang, Lucknow, Macau, Malé, Manila, Nanning, Ningbo, ပီနန်၊ ဖူးခက်၊ Quanzhou, Shenzhen, Surabaya, ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ်၊ Tiruchirapalli, Xi'an, ရန်ကုန် 2
Tigerair Taiwan ထိုင်ဝမ်-ထောင်ဝမ် 2
ယူနိုက်တက် လေကြောင်းလိုင်း Chicago–O'Hare, ဟောင်ကောင်၊ San Francisco (begins3June 2016), တိုကျို-နာရိတ (ends2June 2016), Washington–Dulles (ends 27 March 2016) 3
Uzbekistan Airways ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Tashkent 1
ဗီယက်ဂျက် လေကြောင်းလိုင်း ဟိုချီမင်းစီးတီး 3
Vietnam Airlines ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး 3
West Air Chongqing 1
XiamenAir Fuzhou, Hangzhou, Xiamen 1
လေဆိပ် အဆောက်အဦး (၃) ခုလုံးတွင် ခေတ်မှီလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်များအတွက် ဝန်ဆာင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီး ခရီးသည်များဝင်ရောက်မှုများ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ခရီးသည်များ ဝင်ရောက်မှု တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ခရီးသည် သန်း ၃၀ ကျော်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပျက်ကပ်နှင့် ကြုံတွေ့ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လည်း ခရီးသည် သန်း ၅၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
လေဆိပ်၏ မြောက်ဘက်တွင် လေဆိပ်ဂိုဒေါင် ထားရှိပြီး လေကြောင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်အနေဖြင့် ၁.၈၁ သန်း တန်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပမာဏသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် (၇) နှင့် အာရှတွင် အဆင့်(၅) ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီလျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁.၈ သန်း တန်ကို ကိုင်တွယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ချန်ဂီလေဆိပ်သည် လေကြောင်းကုန်သွယ်မှု ထူးချွန်ဆု ကို ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ၂၃ ၈၀၃ ၁၈၀ ၁ ၂၈၃ ၆၆၀ ၁၆၅ ၂၄၂
၁၉၉၉ ၂၆ ၀၆၄ ၆၄၅ ၁ ၅၀၀ ၃၉၃ ၁၆၅ ၉၆၁
၂၀၀၀ ၂၈ ၆၁၈ ၂၀၀ ၁ ၆၈၂ ၄၈၉ ၁၇၃ ၉၄၇
၂၀၀၁ ၂၈ ၀၉၃ ၇၅၉ ၁ ၅၀၇ ၀၆၂ ၁၇၉ ၃၅၉
၂၀၀၂ ၂၈ ၉၇၉ ၃၄၄ ၁ ၆၃၇ ၇၉၇ ၁၇၄ ၈၂၀
၂၀၀၃ ၂၄ ၆၆၄ ၁၃၇ ၁ ၆၁၁ ၄၀၇ ၁၅၄ ၃၄၆
၂၀၀၄ ၃၀ ၃၅၃ ၅၆၅ ၁ ၇၇၅ ၀၉၂ ၁၈၄ ၉၃၂
၂၀၀၅ ၃၂ ၄၃၀ ၈၅၆ ၁ ၈၃၃ ၇၂၁ ၂၀၄ ၁၃၈
၂၀၀၆ ၃၅ ၀၃၃ ၀၈၃ ၁ ၉၃၁ ၈၈၁ ၂၁၄ ၀၀၀
၂၀၀၇ ၃၆ ၇၀၁ ၅၅၆ ၁ ၉၁၈ ၁၅၉ ၂၂၁ ၀၀၀
၂၀၀၈ ၃၇ ၆၉၄ ၈၂၄ ၁ ၈၈၃ ၈၉၄ ၂၃၂ ၀၀၀
၂၀၀၉ ၃၇ ၂၀၃ ၉၇၈ ၁ ၆၃၃ ၇၉၁ ၂၄၀ ၃၆၀
၂၀၁၀ ၄၂ ၀၃၈ ၇၇၇ ၁ ၈၁၃ ၈၀၉ ၂၆၃ ၅၉၃
၂၀၁၁ ၄၆ ၅၀၀ ၀၀၀ ၁ ၈၇၀ ၀၀၀ ၃၀၁ ၇၀၀
၂၀၁၂ ၅၁ ၁၈၁ ၈၀၄ ၁ ၈၀၆ ၂၂၅ ၃၂၄ ၇၂၂
၂၀၁၃ ၅၃ ၇၂၆ ၀၈၇ ၁ ၈၅၀ ၂၃၃ ၃၄၃ ၈၀၀
၂၀၁၄ ၅၄ ၀၉၃ ၀၇၀ ၁ ၈၄၃ ၇၉၉ ၃၄၁ ၃၈၆
ချန်ဂီလေဆိပ်နှင့် မြို့နှင့်ကို East Cost Parkway အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သော ၂၀ ကီလိုမီတာကို ဖို့မြေပေါ်တွင် သီးသန့် တည်ဆောင်လိုက်သောကြောင့် တည်ရှိပြီးသော လမ်းများနှင့် မရောတော့ဘဲ သီးသန့်ဖြစ်တည်လျက်ရှိသည်။
လေဆိပ်အဆောက်အဦးများကိုလည်း ဘေးချင်းကပ်ရပ် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် အဆောက်အဦး တစ်ခုနှင့် တစ်ခု လွယ်ကူစွာ သွားနိုင်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ မစ်ဇူဘီရှီ ကုမ္ပဏီမှ လေဆိပ်အဆောက်အဦး အမှတ်(၃) ရှိ Check-in ဧရိယာ ကို သီးသန့်ခွဲထုတ်ခြင်း၊ နည်းပညာများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လေဆိပ်အဆောက်အဦးများ အကြား ဆက်သွယ်ရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၃) ခု အကြား ချန်ဂီလေဆိပ် ကောင်းကင်ရထားသည် ဘူတာ (၇) ဘူတာနှင့် ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိသည်။ ရထားကို ကူးပြောင်းခရီးသည်များစီးရန် နှင့် ခရီးသည်အကုန်လုံးစီးရန် (၂) ခု ပြုလုပ်ပေးထားသည်။
ချန်ဂီ လေဆိပ်ကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ မြေအောက်ရထားကွန်ရက်နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်ရှိ ဘူတာမှာ ချန်ဂီလေဆိပ်ဘူတာ ဖြစ်ပြီး လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၂) နှင့် (၃) ကြား မြေအောက်ထဲတွင် တည်ရှိသည်။ ဘူတာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ကနဦး ဖွင့်ခြင်းတွင် လေဆိပ်နှင့် နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသော ရထား (၁) စင်းသာ ပြေးဆွဲပေးပြီး လေဆိပ်အဆာက်အဦး (၂) မှသာ သွားလာနိုင်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ချန်ဂီလေဆိပ်ဘူတာ နှင့် တာရာမရာ (Tanah Merah) ဘူတာတို့နှင့် အသွားအပြန် ချိတ်ဆက်ပြေးခဲ့သည်။ တာရာမာရာ ဘူတာမှ တဆင့် မြောက်-ရှေ့ ရထားလိုင်း သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်။
ဘတ်စ်ကားများကို လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၃) ခုလုံး၏ မြေညီထပ်များတွင် တွေ့နိုင်သည်။
အငှားကားများကိုလည်း လေဆိပ်အဆောက်ဦး အသီးသီးရှိ ဆိုက်ရောက်ဆောင်များမှာ တွေ့နိုင်သည်။
↑ Runway 02L is ၄,၀၀၀ m (၁၃,၀၀၀ ft) and 20R is ၃,၂၆၀ m (၁၀,၇၀၀ ft) withadisplaced threshold of ၇၄၀ m (၂,၄၃၀ ft). Thus aircraft landing on 20R will have to avoid touching down on the displaced threshold but may use it for departures.
↑ Runway 02R/20L is currently restricted to the Republic of Singapore Air Force (see Changi Air Base). It will be extended for commercial use in the future.
↑ ချန်ဂီလေဆိပ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Archived3December 2011 at the Wayback Machine.။ Retrieved on 15 August 2012.
↑ Changi Airport crosses 54-million passenger mark in 2014။ Changi Airport Group (17 August 2015)။ 30 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AIRFRANCE Ends Jakarta Service from late-Mar 2016။ airlineroute။3February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (Update 2) Emirates Splits Singapore / Brisbane Service May – Sep 2016 (8 December 2015)။ 8 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Direct flights to Fiji from Changi Airport to be launched in early April။ Straits Times (6 November 2015)။
↑ Fiji Airways to fly to Singapore Changi Airport twice weekly, special launch fares starting from F$999
↑ Scoot, Tigerair tie up to service Singapore-Guangzhou air route, Companies & Markets News & Top Stories - The Straits Times
↑ ၈.၀ ၈.၁ Scoot to fly to Saudi Arabia from May, taking over from parent SIA, Singapore News & Top Stories - The Straits Times
↑ ၉.၀ ၉.၁ News releases။ 11 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singapore Airlines To Add Düsseldorf To Route Network။ Singapore Airlines။9November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ http://finance.yahoo.com/news/united-airlines-operate-longest-scheduled-010000485.html;_ylt=AwrC1zE8v6pWp1IAeSTQtDMD;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စင်ကာပူ_ချန်ဂီလေဆိပ်&oldid=623528" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။